Pratik Shah: AI (ဉာဏ်ရည်တု) က ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ပေးနေပုံ။ - English-Video.net
Pratik Shah - Medical technologist
Dr. Pratik Shah creates novel intersections between engineering, medical imaging, machine learning and medicine.
Dr. Shah's research program at the MIT Media Lab develops scalable and low-cost diagnostics and therapeutics. His ongoing research areas at MIT include: 1) artificial intelligence and machine learning methods for detection of cancer biomarkers using standard photographs vs. expensive medical images; 2) unorthodox artificial intelligence and machine learning algorithms to design optimal and faster clinical trials and to reduce adverse effects on patients; and 3) low-cost and open source imaging devices, paper diagnostics, algorithms and mobile phones to improve public health and generate real-world data.
Clinical studies with Pratik's medical technologies have revealed "missing sick" patients, who otherwise remain undiagnosed in conventional healthcare settings. Dr. Shah's graduate and postdoctoral research contributed to the discovery ofavaccine component to prevent pneumococcal (Streptococcus pneumoniae) diseases; the identification of new pathways, technologies and metabolites as antimicrobials to target gastrointestinal infections; andanonprofit to deployalow-cost water quality test for the developing world.
Past recognition for Dr. Shah includes the American Society for Microbiology's Raymond W. Sarber national award, the Harvard Medical School and Massachusetts General Hospitals ECOR Fund for Medical Discovery postdoctoral fellowship, the AAAS-Lemelson Invention Ambassador Award andaTED Fellowship. Pratik has been an invited discussion leader at Gordon Research Seminars;aspeaker at Cold Spring Harbor Laboratories, Gordon Research Conferences and IEEE bioengineering conferences; andapeer reviewer for leading scientific publications and funding agencies. Pratik hasaBS, MS, andaPhD in Microbiology and completed fellowship training at The Broad Institute of MIT and Harvard, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.
Pratik Shah | Speaker | TED.com
Pratik Shah: AI (ဉာဏ်ရည်တု) က ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ပေးနေပုံ။
ယနေ့ခေတ်ရဲ့ AI (ဉာဏ်ရည်တု) အယ်လ်ဂိုရီသမ်တွေဟာ လူနာတစ်ဦးရဲ့ ရောဂါကို သိရှိဖို့ သောင်းချီတဲ့ စျေးကြီးတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ ဆေးစစ်တမ်းတွေကို စရိတ်စကနည်းပြီး ပိုထိရောက်အောင်ဖန်တီးခြင်း AI (ဉာဏ်ရည်တု) တစ်ခုကို ပုံစံသွင်းပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဒေတာပမာဏကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ခပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရော။ TED ဝိုင်းတော်သား Pratik Shah ဟာ ဒီအတိုင်းလုပ်ဖို့ ကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အစဉ်အလာမဟုတ်တဲ့ AI နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသုံးရင်းနဲ့ပါ။ Shah ဟာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အယ်လ်ဂိုရီသမ်တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ ပုံရိပ် ၅၀ လောက်နည်းပြီး လိုအပ်တဲ့ နည်ပညာတစ်ခုကို တီထွင်ထားပါတယ်။ ရောဂါစစ်တမ်းတစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ ဆဲလ်ဖုန်းမှာ ရိုက်ထားတာကိုတောင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆေးပညာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကို စိစစ်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုက အသက်ကိုခြိမ်းခြောက်တဲ့ နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေကို စောစီးစွာ သိရှိလာစေနိုင်ပြီး AI ထောက်ကူထားတဲ့ ရောဂါစစ်တမ်းကို ကမ္ဘာအနှံ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဝန်းကျင်တွေဆီ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပုံအကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာလိုက်ပါဦး။
Dr. Pratik Shah creates novel intersections between engineering, medical imaging, machine learning and medicine. Full bio
Computer algorithms today
are performing incredible tasks
with high accuracies, atamassive scale,
using human-like intelligence.
တိကျမှုတွေနဲ့ ပမာဏများစွာ စွမ်းဆောင်နေတယ်။
And this intelligence of computers
is often referred to as AI
မကြာခဏတော့ AI (သို့) ဉာဏ်ရည်တုလို့
or artificial intelligence.
AI is poised to make an incredible impact
AI ဟာ အနာဂတ် ဘဝတွေအပေါ် မယုံနိုင်
တဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခု လုပ်ပေးဖို့ အသင့်ပါ။
we still face massive challenges
in detecting and diagnosing
several life-threatening illnesses,
such as infectious diseases and cancer.
ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရင်ဆိုင်ရဆဲပါ။
Thousands of patients every year
နှစ်စဉ် ထောင်ချီတဲ့လူနာတွေဟာ အသည်း(သို့)
due to liver and oral cancer.
အာခေါင် ကင်ဆာတွေကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်။
Our best way to help these patients
ဒီလူနာတွေကို ကူညီဖို့ ကျွန်တော်တို့
is to perform early detection
and diagnoses of these diseases.
ဒီရောဂါတွေရကို ရှာဖွေမှု ၊တွေ့ရှိမှုကို
So how do we detect these diseases today,
and can artificial intelligence help?
ဒီတော့ ယနေ့ ဒီရောဂါတွေကို ဘယ်လို
In patients who, unfortunately,
are suspected of these diseases,
an expert physician first orders
ကျွမ်းကျင်တဲ့သမားတော်က ဦးဆုံး ညွန်ကြားတာက
such as fluorescent imaging,
CTs, MRIs, to be performed.
CTs MRIs တွေလုပ်ဖို့ပါ။
Once those images are collected,
another expert physician then diagnoses
those images and talks to the patient.
ရောဂါဖော်ထုတ်ပြီး လူနာကို ပြောဆိုပါတယ်။
a very resource-intensive process,
သိတဲ့အတိုင်း ဒါဟာ အင်မတန် အရင်းအမြစ်
requiring both expert physicians,
expensive medical imaging technologies,
ကျွန်းကျင်သမားတော်နဲ့ စျေးကြီးတဲ့ ဆေးဘက်
and is not considered practical
And in fact, in many
industrialized nations, as well.
So, can we solve this problem
ဒီတော့ ဒီပြဿနာကို ဉာဏ်ရည်တုကို
Today, if I were to use traditional
ယနေ့မှာ ဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ အစဉ်အလာ
I would require 10,000 --
ပုံ ၁၀၀၀၀ လိုလိမ့်မယ်၊
I repeat, on an order of 10,000
of these very expensive medical images
ထပ်ပြောမယ်၊ အရင်ဆုံး လုပ်ဆောင်ဖို့
ဒီစျေးကြီးတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံ ၁၀၀၀၀ မှာ
first to be generated.
After that, I would then go
to an expert physician,
ဒီနောက်မှာ ကျွန်တော့အတွက် ဒီပုံတွေကို
who would then analyze
those images for me.
And using those two pieces of information,
I can trainastandard deep neural network
oradeep learning network
ပုံမှန် အတွင်းကျတဲ့ အာရုံကြောကွန်ရက်(သို့)
to provide patient's diagnosis.
Similar to the first approach,
အလားတူ ပြဿနာတွေ ကြုံရပါတယ်။
Large amounts of data, expert physicians
and expert medical imaging technologies.
ကြီးမားတဲ့ ဒေတာပမာဏ၊ ကျွမ်းကျင်သမားတော်နဲ့
So, can we invent more scalable, effective
ဒီတော့ ယနေ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အင်မတန်
and more valuable artificial
ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့ ပိုပြီး အရွယ်အစား
to solve these very important
problems facing us today?
ပိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဉာဏ်ရည်တု တည်ဆောင်ပုံတွေ
what my group at MIT Media Lab does.
MIT Media Lab မှာ လုပ်တာ အတိအကျပါ။
We have inventedavariety
of unorthodox AI architectures
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံထုတ်ခြင်းနဲ့ လက်တွေ့
စမ်းသပ်မှုတွေမှာ ယနေ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့
to solve some of the most important
in medical imaging and clinical trials.
In the example I shared
with you today, we had two goals.
ဒီနေ့ မျှဝေခဲ့တဲ့ နမူနာထဲမှာ
Our first goal was to reduce
Our second goal -- we were more ambitious,
ဒုတိယ ရည်မှန်းချက်က ပိုရည်မှန်းချက်ကြီးတာက
we wanted to reduce the use
of expensive medical imaging technologies
လူနာတွေကို စစ်ဆေးဖို့ စျေးကြီးတဲ့
ဆေးဘက် ပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာ သုံးစွဲမှုကို
For our first goal,
with tens and thousands
အစဉ်အလာ AI လို သောင်းချီတဲ့
of these very expensive medical images,
like traditional AI,
we started withasingle medical image.
From this image, my team and I
figured outavery clever way
ဒီပုံကနေ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဟာ ဘီလီယံ
to extract billions
of information packets.
These information packets
included colors, pixels, geometry
အရောင်တွေ၊ ပစ်ဇယ်တွေ၊ ဂျီဩမေထရီနဲ့့
and rendering of the disease
on the medical image.
Inasense, we converted one image
into billions of training data points,
သဘောတစ်ခုက ပုံတစ်ပုံကို ပုံစံသွင်းထားတဲ့
massively reducing the amount of data
needed for training.
For our second goal,
to reduce the use of expensive medical
imaging technologies to screen patients,
လူနာတွေကို စစ်ဆေးဖို့ စျေးကြီးတဲ့ ဆေးဘက်
we started withastandard,
white light photograph,
acquired either fromaDSLR camera
oramobile phone, for the patient.
DSLR ကင်မရာ(သို့) ဖုန်းတစ်လုံးကနေ
Then remember those
billions of information packets?
ဒီနောက် ဒီဘီလီယံချီတဲ့ သတင်းထုပ်
We overlaid those from
the medical image onto this image,
that we callacomposite image.
we only required 50 --
ပုံ ၅၀ ပဲ ကျွန်တော်တို့လိုတယ်၊
I repeat, only 50 --
of these composite images to train
our algorithms to high efficiencies.
ပုံစံပြောင်းဖို့ ပုံ ၅၀ ပဲ။
To summarize our approach,
instead of using 10,000
very expensive medical images,
စျေးအရမ်းကြီးတဲ့ ဆေးလက်ဆိုင်ရာ ပုံ
၁၀၀၀၀ ကို သုံးတာအစား
we can now train the AI algorithms
in an unorthodox way,
AI အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့
using only 50 of these high-resolution,
but standard photographs,
DSLR ကင်မရာ(သို့) ဖုန်း
acquired from DSLR cameras
and mobile phones,
ဓာတ်ပုံ ၅၀ ပဲ သုံးပြီး
and provide diagnosis.
our algorithms can accept,
in the future and even right now,
some very simple, white light
photographs from the patient,
လူနာဆီက ရိုးရိုးး အရောင်မဲ့
I believe that we are poised
to enter an era
is going to make an incredible
And I think that thinking
about traditional AI,
အစဉ်အလာ AI အကြောင်းတွေးမိတာ
which is data-rich but application-poor,
we should also continue thinking
about unorthodox artificial
which can accept small amounts of data
and solve some of the most important
problems facing us today,
Pratik Shah: AI (ဉာဏ်ရည်တု) က ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုကို ပိုမိုလွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ပေးနေပုံ။ | TED Talk | TED.com